Wanaagga Waxa Faafiya Qofka Fiican! – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wanaagga Waxa Faafiya Qofka Fiican!
Wanaagga Waxa Faafiya Qofka Fiican!
Nin faylasuuf oo hor fadhiya gurgiis ayaa nin raadinaya guri uu kiraysto waydiiyay in wax guri ah ka banaan yahay xaafadaha jaarkiisa, si uu u kiraysto. Faylasuufka ayaa weydiiyay “Maxaad uga soo guuraysaa xaafadda aad degan tahay”? Ninkii ayaa ku jawaabay :” Waa xaafad jaar xun oo meel la degi karo maaha”. Faylasuufkiina wuxu ugu jawaabay haddaba xaafaddana way ka sii xuntahay ee iska jog”.
Haddana isagoo weli halkii fadhiya ayuu nin labaad oo isaguna guri raadinayaa soo maray waxaana uu waydiiyay sababta uu uga soo guurayo meesha uu degan yahay Ninka ayaa ugu jawaabay waxa degan dad wanaagsan oo jaar fiican leh laakiin gurigii ayay dadkii lahaa u baahdeen waana taasi sababta aan usoo guuraya. Faylsuufkiina waxa uu ugu jawaabay kuwa halkan degenina way ka sii fiican yihiin ee soo guur.
Nin ay saaxiib ahaayeen faylasuufka oo ag fadhiyay ayaa waydiyay sababta uu labada nin midna u eryay midna usoo dhoweeyay waxaa uu u ugu jawaabay.
“ Qofka xumi abaalkiisa ayaa hela, markaa isagaa xun dadkaasi xun haku xidhnaado, yaanu xumaantiisa dadka kale soo gaadhsiin “ .
Qofka wanaagsani ma sheegixumaanta dadka kale.
Previous articleSool: Beello Shaqaaqo Dhexmartay Oo Aqbalay Gogol Nabadeed
Next articleXirfadda ku ganacsiga jinka
Madaxwayne Erdogan Oo Sheegay Inuu xaaladda Suuriya Kala Hadlayo Hogaamiyaasha Dalalka...
WARBIXINTII U DAMBEYSEY EE COVID-19 ee Somaaliya: